Plọgị ike na mpụga Ddị D - mgbasa mgbasa dị iche iche maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-eji Ddị D eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị na India na Nepal. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị D)
India nwere ọkọlọtọ n’elu plọg nke akọwapụtara na British Standard 546 (ọkọlọtọ na Great Britain tupu 1947). Ihe nkwụnye egwu a 5 amp nwere nwere okirikiri atọ na-etolite triangle. Akụkụ etiti ụwa bụ 20.6 mm ogologo ma nwee dayameta nke 7.1 mm. Igwe 5.1 mm na plọgị anọghị n ’ogologo 14.9 mm dị n’ogologo, n’ogologo ndị nwere oghere 19.1 mm.
Oghere dị n'etiti etiti ahụ n’agbata pining ahụ na etiti etiti ahịrị ndị na-ejikọ ike abụọ ahụ bụ 22.2 mm. Mdị M, nke nwere nnukwu pin na akara ya na amps 15, a na-eji ya na ụdị D maka ngwa buru ibu na India, Nepal na Pakistan. Sofọdụ soket nwere ike iwere ha abụọ ụdị M na pịnye D plọg.
Na mberede, enwere nkwekọrịta a na-atụghị anya ya n'etiti sọks ụdị D na pọpupọ Europe dị iche iche. Ọ bụ ezie na emmepe nke otu nke Europlug (ụdị C) nọkọtara ọnụ (17.5-18.6 mm vs 19.1 mm) karịa nke ụdị plọg D, Europlug na-adabakarị na ụdị D na-enweghị nnukwu mbọ, na-enye ekele maka njupụta nke ntụtụ ya.
Agbanyeghị, enweghi ike itinye plọg ahụ na ebe nchekwa D, n'ihi na ngalaba ndị ahụ dị na akwa ụkwụ na plọg ha, ha toro ogologo karịa pịkọta ụdị plọg (19 mm vs 14.9 mm). Nke a bụ ihe kpatara ya ụdị plọg anaghị eme kọntaktị ziri ezi mgbe niile ma ọ nwere ike ime ka oghere dị ọkụ, nke, n'ọnọdụ ụfọdụ, nwere ike ibute mkpirikpi.
Ọ bụ ezie na ụdị C Enwere ike ịtụle plọg na ụdị sọks dị ka ihe na-adịghị ize ndụ, mana ngwongwo 'dị mfe ịrụ ọrụ', na-eji E/F plọg na ụzọ mpụga D dị ezigbo njọ. Ogwe nke plọg ụdị E & F pọkọd dị nnọọ nso (19 mm vs 19.1 mm) karịa nke ụdị D, mana, n'adịghị ka Europlugs (ụdị C), ha enweghi udiri udiri emeghari.
Nke a putara na a gha ha into mmanye ha ebe ha na-abanye. O doro anya na ụdị ojiji a na-ezighi ezi na-eweta oke nchekwa nchekwa maka ọtụtụ ihe. Nke mbu - adighi iche ụdị C - E & F plọg ekwesịrị ịzọta ala, mana mgbe ejiri ya na Ddị D, nke a agaghị abụ ikpe. Yabụ, jikere maka nnabata na-egbu maramara na onye na-eji ngagharị sekit na-agagharị.
Ọzọkwa, ụdị E na F plọg enweghị ike itinye ya na dọkụ n ’D, n’ihi na atụdo ahụ toro ogologo karịa plọg ụdị plọg (19 mm vs 14.9 mm). Nke a pụtara na 4.1 mm nke atụ nke plọg ụdị E & F ka ga-ekpughere ya mgbe a na-etinye ya ma ọ bụrụ na ị na-emetụ ndụ ogologo, ị ga-enweta ihe ọkụ eletrik. Ihe ize ndụ a adịghị na ya ụdị C pọpụ, ebe ọ bụ na etichiela nko ha.
Ọ bụ ezie na ụdị D ugbu a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na e ji ya eme ihe na India na Nepal, ọ ka nwere ike ịchọta oge ụfọdụ na họtel ndị dị na UK. Okwesiri iburu n’uche na ndi njem adighi agbali ijiko ihe obula na BS 546 out-pin out nke ahutara na UK dika enwere ike idi na sekit nke nwere ebumnuche puru iche: dika maka inye uzo ugbua (DC) ma obu maka ikwunye ya. na oriọna ndị ọkụ ọkụ na-achịkwa ma ọ bụ dimmer.
Ddị Ddị D bụ otu n'ime ndị kasị dị ize ndụ n'ụwa: thedị ahụ anaghị edozi (yabụ, pinks adịghị enwe mkpuchi ojii na-ahụ maka plọg ahụ dịka ụdị C, G, I, L or N plọg), nke pụtara na ọ bụrụ n ’ụdị D pịpụrụ otu aka, dọpụrụ ya na oghere ahụ! Littlemụaka na-etinye ihe egwu n'ihe ọkụ mgbe ha dọpụrụ plọg dị otú ahụ ma tinye mkpịsị aka ha na ya. Notdị D na-apụtaghị na mgbidi ahụ, yabụ ha anaghị enye nchebe ọ bụla site na imetụ paịlị ahụ.